Yohimbine hcl powder: Isisombululo, Izibonelelo, Imiphumo emibi, IziPhononongo
/Blog/Yohimbine/Yohimbine powder: Isisombululo, izibonelelo, Imiphumo emibi, iziPhononongo
ezaposwa ngomhla 04 / 13 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Yohimbine.
Yonke into malunga ne yohimbine powder
3. I-yohimbine powder isebenza njani?
4.Uthatha njani i-yohimbine powder
I-5.Ixesha elide i-yohimbine i powder yokugqibela?
6.Yintoni i-yohimbine powder? Izibonelelo kunye neziphumo
I-7.yohimbine powder yindlela ephumelelayo yokulahlekelwa yindoda?
I-8.Iyhimbine i-powder Safe?
9.yohimbine powder Ingozi
I-10.yohimbine nemiphumo emibi
11. yohimbine powder vs Yohimbe
I-12.Iziqulatho kunye neYombmbine powder Supplements
14.yohimbine powder Iziphumo
15.Kubani abantu bancedisa nge-yohimbine powder? I-HCL powder?
16.Izixhobo ezongezelelekileyo ze-yohimbine powder
yohimbine powder ividiyo
I. yohimbine powder esisiseko Abalinganiswa:
igama: yohimbine powder
i-yohimbine i-hcl powder ligama lomthi oseluhlaza ofumaneka kwiindawo eziphambili nakwiNtshona-ntshona Afrika. I-bark ye yohimbe iqukethe ikhemikhali ebizwa ngokuba yohimbine powder, esetyenziselwa ukwenza iyeza. i-yohimbine powder (Aphrodyne, Yocon) yindlela yohimbine ye-hcl powder eyinkunkuma yezilwanyana eMelika.
i-yohimbine i-powder supplement ngokuvamile ibeka uluhlu lwama-yohimbe bark okanye i-yohimbine powder njengesithako esisebenzayo. Nangona kunjalo, ezinye zezi mveliso zingenakho ukubonelela ngolwazi oluchanekileyo malunga nomlinganiselo we-yohimbine powder kwi-supplement. Kwakhona, i-yohimbe yongeza uluhlu lwe-yohimbine powder njengesithako esisebenzayo. i-yohimbine i-hcl powder iimveliso eziqulethe i-yohimbine powder eyenziwe ngumntu njenge-ingredient azivumelekanga ukuba zithengiswe njenge-supplementary diet in the US.
i-yohimbine i-hcl powder ithathwa ngomlomo ivuse ngesondo, ngenxa ye-erectile dysfunction (ED), iingxaki zesini ezibangelwa yimithi yokudakumba ebizwa ngokuthi i-selective-serotonin reuptake inhibitors (i-SSRIs), kunye neengxaki zobundlobongela ngokubanzi kumadoda nabasetyhini. Isetyenziselwa ukwenza umsebenzi wezemidlalo, ukulahleka kwesisindo, ukunyuka, intlungu yesifuba, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, uxinzelelo lwegazi oluphantsi xa lumile, isifo sesifo sikashukela, kunye nokudandatheka kunye namanye amachiza.
2. Iifom-yohimbine powder
i-yohimbine powder ibhloko ye-alpha-1 kunye ne-alpha-2 adrenoceptors, ukwandisa i-adrenaline kunye ne-dopamine kunye nokunciphisa ama-serotonin. Ukuvimba kwezi mphumbisi kwandisa uxinzelelo lwegazi, kukhupha i-insulin kunye nokunciphisa amazinga eshukela egazi.
i-yohimbine hcl powder ibhloko ye-serotonin-1B, -1D, -2A, kunye ne-2B (5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT2A, kunye ne-5-HT2B) kunye ne-dopamine-2 kunye ne-dopamine-3 (D2 ne-D3) zamkeli.
3. I-yohimbine powder i-HCL powder WORK?
i-yohimbine powder I-HCL powder isetyenziswa kakhulu njengoncedo ekunciphiseni amafutha omzimba. Abaninzi bethu banzima nale ngxaki, akuyona inkinga elula ukuyixazulula, ngoko ke inkxaso eyongezelelweyo isoloko isiluncedo. Okwangoku, kukho izinto ezininzi kwiimarike ezisebenza ngcono okanye zonyusa ukunciphisa umzimba. Ngokuqhelekileyo, kunjalo, zenza ngokukhetha okanye zichaphazele ezinye izinto zempilo. Ngaba i-yohimbine i-hcl powder i-HCL powder iyenjalo? Kuvela ukuba ayinayo, kwaye ngaphandle kolawulo olusebenzayo nangempumelelo ukutshisa kwamafutha, ikwaxhasa kwakhona inkqubo epheleleyo yecandelo lomzimba.
i-yohimbine powder I-HCL powder yindlela ekhoyo yonkxaso yokuxhasa ubunzima obubanzi. Akusebenzi nje kuphela ukusebenza ngendlela yokunciphisa amafutha omzimba, kodwa kuphucula ubulili (ingakumbi kumadoda). Iphucula uxinzelelo lwegazi kwindawo ebalulekileyo ebomini (ingqondo), efuna ukukhuselwa okukhethekileyo. Kuba oku kunemiphumo emibi yecala.
Nangona kunjalo, kufuneka kukhunjulwe ukuba i-yohimbine i-hcl powder i-HCL powder iyona ndlela iphumelele ngendlela ye-hydrochloride, kwaye ingqalelo kufuneka ihlawulwe kumgangatho womvelisi ukuphepha ukuphazamiseka kwimixholo yento esebenzayo kwimveliso, zichaphazela kakubi umxholo wokuxhaswa.
4. Ungathabatha njani i-yohimbine HCL powder? (Ncoma i-yohimbine powder HCL dosage)
• 14 mg kumntu we-150lb
• 18 mg kumntu we-200lb
• 22 mg kumntu we-250lb
Ukongezwa kusebenza kakhulu phakathi kokutya okanye ngexesha lokuzila ukudla okufutshane.
Ilumkiso kufuneka lisetyenziswe kwisisindo somzimba esiphezulu, ekubeni isistim se-cardiovascular singazilungele ukuphatha i-agent evuselelayo njenge yohimbine powder HCL powder. Xa ukongeza i-yohimbine powder i-HCL powder ngokokuqala ngqa, qalisa rhoqo nge-dose-dose kwaye uhlole ukunyamezela ngaphambi kokuqhubeka.
Ukulumka kufuneka kusetyenziswe kwakhona ukususela kwiimveliso ezininzi eziqukethe i-yohimbine i-hcl powder i-HCL powder engabhalwanga ukuba i-yohimbine powder i-HCL powder ibandakanywe, okanye xa yenza, i-dose yangempela isuka kwi-25-150% ye dose ibhalwe. Ekubeni i-dosage ingaba phezulu kunokuba ibhaliwe, le sizathu esongezelelweyo sokuqala ngeqondo eliphantsi.
Xa uqhagamshela yohimbine i-HCL powder kunye nezinye i-advocate agents, i-dose-dose-supplement and work to the dose ekhuthaziweyo, njengokuba izongezo ezimbini zingabandakanyeka.
5. Lixesha elide kangakanani i-yohimbine powder Last?
i-yohimbine powder inomfutshane kakhulu ubomi obulicla kuphela kwi-1 - ii-1.5 iiyure. Oku kuthetha ukuba emva kweeyure ze-3 imiphumo yayo kufuneka igugile ngokupheleleyo. Ubungakanani bemiphumo buxhomekeke kwi-metabolism yakho nento enayo esiswini sakho. Kunconywa ukuba uthathe i-yohimbine i-hcl powder kwisisu esingenalutho ukuvumela ukunyuswa okungcono kwaye ukuze iziphumo zihlale zide.
6. Yintoni i-yohimbine powder? Iinzuzo kunye neempembelelo
(1) Kungenzeka ukuba uncede ukugcina ubunzima obuphilileyo
Enye yeenzuzo eziphezulu ze-yohimbine powder powder yinto enokukunceda ukugcina ubunzima obuphilileyo. Kwisifundo esinye, abadlali abangamashumi amabini bebhola bafumana i-yohimbine powder powder kunye nabanye abangamashumi amabini banikezwa i-placebo. Iqela le-yohimbine le-powder lalinomzimba ocolekileyo othobekileyo ekupheleni kwetyala leveki ezintathu. Akuzange kuthintele ubunzima be-muscle okanye ukusebenza kwezemidlalo kwaye akukho nxaxheba kwabaqaphele nayiphina imiphumo emibi.
Kwesinye isifundo, amabhinqa angamashumi amabini anesibini abanjwe isilingo seeklinikhi zeeveki ezintathu ukuvavanya umphumo we-yohimbine hcl powder kwisisindo. Bonke badla ukutya okuphantsi kwe-energy (i-1000 kcal / imini) ngexesha lovavanyo. Isiqingatha sabasetyhini banikwa i-placebo kwaye esinye isiqingatha sanikwa i-yohimbine powder kane ngeentsuku. Iqela le-yohimbine le-powder lalinomlinganiselo wokunciphisa ubunzima ekupheleni kwetyala. yohimbine hcl powder Kwakhona kubonakala kukukhuthaza inkqubo enempilo. Kwakhona, akukho namnye wabasetyhini ababike naziphi na iziphumo zempembelelo ngexesha lovavanyo.
(2) Inokuncedisa ukukhuthaza i-libido yamadoda kunye nokusebenza ngokwesondo
i-aphrodisiac yendalo ye-Liftmode ye yohimbine powder powder: 98% + ubunyulu
Uhlolo oluvela kwi-2001 lukhangele kuzo zonke uphando kwi-yohimbine i-hcl powder kuze kube ngelo xesha. Abaphandi bafumanisa ukuba kwakukho izifundo ezimbalwa ezenzelwe kakuhle ukuvavanya umphumo we-yohimbine powder. Nangona kunjalo, kwezifundo ababezijonga kwiziphumo zazibonisa ukuba i-yohimbine powder inefuthe elilinganayo kwi-libido yamadoda. Ngokukodwa, incedise ukukhuthaza ubulili obuhle kwimpilo yabantu. Kuzo zonke iifundo, i-yohimbine powder yayingenasiphumo kwimiphumo emibi kwimilinganiselo evamile.
Olunye uphando luhlolisise i-yohimbine powder kunye ne-L-Arginine, i-amino acid efanayo, ukunceda ukukhuthaza ubulili besilisa. Amadoda alitshatileyo angama-40 phakathi kwe-25 kunye ne-50 enamaqondo ahlukeneyo obukhulu obunobunini bobulili anikwe i-placebo okanye i-yohimbine i-hcl powder kwixesha leveki le-4. Abaphandi bafumana umahluko omkhulu phakathi kwamaqela emva kweeveki ze-4, ngokwempilo yesondo.
(3) Unako ukuphucula ukusebenza kwengqondo
Kukho isidingo sophando olongezelelweyo kwimiphumo ye-yohimbine powder ekusebenzeni kwengcamango. Nangona kunjalo, uphando oluninzi luye lwabonisa ukuba lunakho ukukunceda ukuphucula ukuqonda. Ngokomzekelo, ukuhlaziywa kwekliniki enegama elinesihloko esithi "Abaphuculisi beenkcnitive ekwenzeni unyango lwexinzelelo" kubhalwe i-yohimbine i-hcl powder i-HCL powder njengokuba i-agentical agent ekhuthaza ukuqonda nokunciphisa uxinzelelo.
Ngaphezu koko, isifundo sibheke kwimiphumo yokumangalisa kunye nokwesaba kwimvakalelo yabantu kunye nememori enxulumene noyiko. Abaphandi bafumanisa ukuba i-yohimbine i-hcl powder yavuselela imizimba yabantu ukuba ivelise i-epinephrine kunye ne-norepinephrine. Kwakhona bafumanisa ukuba i-yohimbine powder HCL powder yaphucula ixesha lokubuyisela kwiimpawu zokwesaba.
① yohimbine i-hcl powder mhlawumbi ayincedi ngokulahlekelwa kwintsipho enenkani ngokukhethekileyo. Akubonakali kukuncedisa ukugcinwa kwemisipha okanye unayo nayiphi na impahla ekhethekileyo yokutshisa ioli enokukuvumela ukuba unqande amanqatha akho anenkani, ngaphandle kokuba unamandla okwehlisa amandla okwexesha elide.
② i-yohimbine powder ingabangela ukulahleka kwexabiso elinqabileyo, kodwa oku kudla nje ukulahleka kwamanzi okwethutyana ngenxa ye-yohimbine ye-hcl ye-powder effect effect.
③ i-yohimbine powder inokunceda okuncinci ngokulahlekelwa kweoli kodwa ininzi ngokunyuka kweepesenti kwindleko yomelele yamandla kwaye oku kwenzeka kuphela kwixesha elizimeleyo.
7. i-yohimbine powder yindlela ephumelelayo yokulahlekelwa yindoda?
U-Kucio kunye nabo basebenza nabo benza uphando befuna iimpendulo kulo mbuzo. Kwingxelo yabo yophando, ebizwa ngokuthi, "Ngaba i-yohimbine powder HCL powder yenza njengendlela iziyobisi? "Bafumana impendulo enomdla. Kule sifundo, izifundo ezimashumi amabini ezesibhakabhaka ziqale zixhomekeke kwi-3 iveki ye-1,000 Calorie ngosuku lokutya. Emva kwesi sihlandlo seveki ye-3, izifundo ze-10 zanikwa i-yohimbine powder i-HCL powder kunye nezinye i-10 zanikwa indawo yeeveki ezintathu ezongezelelweyo, ngaphezu kwe-1000 Calorie ngosuku lokutya.
Bafumene ukuba unyango lwe-yohimbine powder HCL powder ukwandisa kakhulu ukulahleka kwesisindo; I-3.55 kilogram isisindo somzimba esilahlekile kwi-yohimbine powder iqela le-HCL ngokubhekiselele kwi-2.21 kilogram umzimba olahlekileyo kwiqela le-placebo. Nangona kunjalo, kwakungekho mpembelelo ophawulekayo kwi-lipolysis, kwaye akukho unyango kunye ne-yohimbine powder i-HCL powder elibaziseka isantya sokukhupha isantya. Gcina ukhumbule ukuba ngelixa ubunzima obungaphezu kwamakhilogremu angaphezu kwamakhilogremu aninzi alahlekelwa yi-yohimbine powder i-HCL powder ethatha iqela, kwakungekho milinganiselo apho ubunzima belahlekile, umzimba we-fat or muscle, kwaye ukuba ezi ziphumo zafunyanwa kwiizikazi eziseleyo, zidla i-1000 Calories ngosuku.
Kwakhona, kukho nezinye izondlo ezinokondla ezinokubangela ukulahleka komzimba, kunye nemiphumo embalwa okanye engekho. Abaphandi baphetha ngelithi uphando olongezelelweyo lufanelekile ukuba lunqume ukusetyenziswa kokusebenzisa i-alpha 2-receptor yokuphazamiseka okungeyona into yokulawula njengokongezekileyo ekulawuleni ukunyanya.
I-Waluga kunye nabo basebenza nabo bahlolisisa ukuba iziphumo ezidibeneyo ze-caffeine kunye ne-yohimbine powder i-HCL powder yayisemsebenzini wentliziyo kunye nesantya sokulahleka kwesisindo. Ukwenza oku bahlula abafazi abangamashumi amabini anesibhozo, babe ngamaqela amathathu e-9. Iqela lokuqala lafumana ukutya okukhawuleza kakhulu (i-400 Calories ngosuku) kunye ne-placebo. Iqela lesibini lafumana ukutya okufanayo, kunye neyeza zokuncedisa i-caffeine. Iqela lesithathu lafumana ukutya okufanayo, kunye ne-caffeine unyango olwenziwa kwiqela 2, kunye ne yohimbine powder HCL powder.
Unyango lwaluhlala kwiintsuku ze-10. Ekupheleni kolu cwaningo abaphandi babona ukunciphisa okukhulu kumzimba wonke kuwo onke amaqela, kungabikho umahluko phakathi kweqela; Iqela le-1 lalahlekelwa iikhilogram ze-3.3 zesisindo somzimba, iqela le-2 lalahleka iikhilogram ze-3.5 zesisindo somzimba, kwaye iqela le-3 lalahleka iikhilogram ze-3.4 zobunzima bomzimba. Nangona kungekho miphumo ephawulekayo yabonwa phakathi kwamaqela, abaphandi bachaza ukuba le ngxelo yayisemva kweentsuku ze-10, kwaye ukuba izifundo ziphantsi kokutya okuncinci kakhulu kwekhalori, okungahle kuphazamise nayiphi na imiphumo yokulahlekelwa kwesisindo sezinto ezongezelelweyo, okanye mfutshane ukuhlula imiphumo echazwe ngabanye abaphandi.
Nangona kunjalo, iinjongo eziphambili zolu vavanyo kwakukujolise kwimiphumo emibi yonyango lokuncedisa kwinkqubo ye-cardiovascular system. Enyanisweni, abaphandi banqume ukuba ukufakwa kwe-yohimbine powder i-HCL powder kunye ne-caffeine, yenza iinguqu ezinokuthi zitshintshe inkqubo ye-cardiovascular system. Baphetha ukuba ukongezwa kwe-yohimbinehcl powder i-HCL powder kufuneka iphathwe ngokulumkisa, kwaye kufuneka ikhutshwe ngokukodwa kubantu abaneentlungu ezinobunzima beentliziyo.
8. Ngaba i-yohimbine ipowder powder Safe?
I-aphrodisiac i-Liftmode ye yohimbine powder: 98% + ubumsulwa. i-yohimbine i-hcl powder ikhuseleke ngokuphawulekayo xa idliwe yodwa kunye neyiliso eliphakanyisiweyo.Noko kunjalo, i-yohimbine powder inamandla kakhulu kwaye inokusebenzisana nenani lamachiza kunye nezinye izongezelelo zemfuyo. Ungasebenzisi i-yohimbine powder kunye namanye amayeza ngaphandle kokuba umiselwe ugqirha wakho.
i-yohimbine powder ingaba nemiphumo emibi xa isetyenziswe kuma-dosage aphezulu kunaphezulu. Musa ukudlula umlinganiselo ophakanyisiweyo we-yohimbine hcl powder. Ezinye iziphumo ezichaphazelekayo zibandakanya ukubetha, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, ukungazinzi, kunye nentloko. Imiphumo emibi ayinqabile kakhulu kwisilinganiso esinconywayo.
9. yohimbine powder HCL Ingozi
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu kunye nokwanda kwenani lentliziyo yimiphumo emibili echaphazelekayo yohlobo lwe-yohimbe HCL kunye ne-yohimbine powder i-HCL powder, ngokwe-NCCAM kunye ne-Mayo Clinic. Bobabini i-yohimbe kunye ne-yohimbine i-hcl powder ingaba yingozi xa ithathwa kwi-doses ekhudlwana kunokunconywa, ngoko qhagamshelana nodokotela wakho ngaphambi kokuba uqale ukuthatha imifuno okanye isiza, kwaye ulandele imiyalelo yakhe. Ngokutsho kweSikhumbuzo iSetan-Kettering, abo banexinzelelo, i-schizophrenia, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, okanye izifo zesibindi, isibindi okanye intliziyo kufuneka ziphephe ukuthatha i-yohimbe, njengokuba ngabafazi abasakhulelwe. Ngenxa yokuba idibana neendlela ezininzi eziqhelekileyo zonyango, qhagamshelana nodokotela ngaphambi kokuba uthathe i-yohimbe okanye i-yohimbine powder i-HCL powder.
10. i-yohimbine powder effects effects
Ngaphandle kwesoji ephakanyisiweyo (5.4 mg 3x / imini), i-yohimbine powder ineempembelelo ezininzi. Izilingo eziphezulu (200-5,000 mg) ziphumo zibe namandla imiphumela kwaye ingaba yingozi kwiingqondo. Amanani aphakamileyo kakhulu (ngaphezu kwe-5,000 mg) ingaba yingozi.
Iziphumo eziqhelekileyo zemiphumo ye-yohimbine ye-hcl powder yile:
- Intlungu yesisu
-Unyusa uxinzelelo lwegazi (uxinzelelo lwegazi)
-Izinga lentliziyo elongezelelweyo (tachycardia)
- Ukungaphumeleli kweCilney
Iziphumo eziliqela zibonise ukuba i-yohimbine powder ikhuthaza ukuziphatha nokutya kwezidakamizwa kwimizi kunye neenkomo. Ngenxa yokuba i-yohimbine i-hcl powder iyanciphisa ukucima, kufuneka igwenywe ngama-hemophiliac kunye nalabo abasandula ukuhlinzwa. Igazi legazi elifana ne-aspirin, i-warfarin, ne-heparin akufanele ithathwe nge-yohimbine powder i-HCL powder. i-yohimbine powder ayifanele ithathwe ngamachiza anyukisayo uxinzelelo lwegazi kunye nenqanaba lentliziyo njenge-tricyclic antidepressants.
11. yohimbine hcl powder noJohimbe
Yohimbe bark, i-bark yePausinystalia umthi we yohimbe, ovela kwintshona yeAfrika, ngumthombo wepiksi ye-yhimbine powder, esebenzisa i-alkaloid. Nangona i-yohimbine powder kunye ne-yohimbe bark, ngokuqinisekileyo, idibeneyo, ayinakutshintshiselana, ngokoMthetho weSizwe wezeMpilo, kwaye ayingqamene nesilwanyana esivela kwi-yohimbine hcl powder, ebizwa ngokuba yi yohimbine powder kwaye ithengiswa iziyobisi.
Ngokweziko leSizwe leNgcaciso leManyanisiweyo kunye neNCCAM, i-yocmbe ibark isetyenziswe ngokomlando ukunyusa umnqweno wesini, kwaye ngoku kutshanje, isetyenziselwe ukuphathwa kakubi kwesifo se-erectile. Ngokuqhelekileyo isetyenzisiwe njengetayi, nangona ingaba yongeniswa kwifomethe okanye kwifomsule ifomu.
i-yohimbine powder yikhemikhali enokufunyanwa ngokwemvelo kwi-bark yomthi we-yohimbe, ngokwe-NCCAM. I-alkaloid, eyinto eyenziwa ngokwemvelaphi yendalo yamakhemikhali. Ngokutsho kwe-Encylopaedia Britannica, i-alkaloids-kuquka iintlobo ezaziwa njenge-morphine kunye ne-nicotine-zineempembelelo ezahlukeneyo zomzimba. Kwizifundo zekliniki, ngokweSikhumbuzo seSikhumbuzo seCroan-Kettering, i-yohimbine i-hcl powder iboniswe ukuphathwa kakubi ngokwesondo.
Kuthengiswa phantsi kwegama elithi "yohimbine powder" kwaye phantsi kwamagama amagama aquka "iYocon," i-yohimbine i-hcl powder yile mithi yonyango esebenzisa i-yohimbine powder njengesithako sayo esisebenzayo, ngokweMayo Clinic. Ngokuqhelekileyo kuthengiswa ukuphathwa kakubi. Iyakwandisa ukuhamba kwegazi kwiphaya kwaye ingasetyenziselwa ukunciphisa abafundi, ngokweMayo Clinic. Iqala ukusebenza ezimbini kwiiveki ezintathu emva kokuba uqale ukuyithatha. I-Mayo Clinic ithi isilinganisi esingaqhelekanga sokungabi namandla ku-5.4 ku-6 mg kathathu ngosuku, kodwa kufuneka ulandele imiyalelo yegciwane lakho.
(4) Njani iJohimbe ne yohimbine powder Work?
Ngenxa yokuba i-yohimbine ipowder ivela kwi-yohimbe, ineendlela ezifanayo zesenzo. Ngokutsho kweSmotel Sloan-Kettering, yohimbine i-hcl powder-kunye ne-yohimbe, kuba iqukethe i-yohimbine powderase-iyenziwa njenge-monoamine oxidase-okanye i-MAO-inhibitor kunye ne-calcium channel blocker, kwaye ivuselela inkqubo ye-nervous central. Ukongezelela, kwandisa ukuphuma kwegazi emzimbeni womzimba kunye nokuphucula imilambo yegazi.
12. Ukuqapha kunye neYombmbine powder Supplements
Ixabiso le-yohimbine powder kwimveliso emininzi ayifumanga kuba zihlala zibhalwe ngokungalunganga. Ucwaningo olwenziwe kwi-49 yohimbine i-hcl powder supplements lubone ukuba kuphela i-2 inikezele ngokubhaliweyo kunye nolwazi oluchanekileyo .Umlinganiselo we-yohimbine powder uvela kwi-0 ukuya kwi-12.1 mg, ephakamileyo kakhulu kune-dose ephakanyisiweyo ye-5.4 mg. Kweemveliso ezidweliswe ubuninzi obuchanekileyo, amanani ayenzileyo avela kwi-23% ukuya ku-147% yemali echaziweyo. Iziphumo eziqhelekileyo ziqhelekileyo kwiimfucumfucu zemifuno ye-Yohimbe xa kuthelekiswa nemveliso ye-yohimbine ye-powder yemveliso kuba iimveliso zonyango ziphantsi kwamanyathelo okukhusela okuqhelekileyo kwaye zikhokelo ezicacileyo.
Omnye umsebenzisi wathi i-3-4 mg ye-yohimbine i-hcl powder yaphucula ukusebenza kwezesondo, kodwa yabangela ukuhlaselwa ngumxhala. Omnye umsebenzisi wabika ukujuluka okugqithisileyo kunye nokunyuka kwentliziyo yeenxa zonke ze-150 beats ngomzuzu malunga neeyure ze-2 emva kokuthatha i-yohimbine powder powder. Abasebenzisi abaningana babika ukuba babe namava amabi afana nokuhlaselwa kwexhala kunye nokunyuka kwentliziyo. Omnye umsebenzisi walahlekelwa i-17 lbs emva kokuthatha i-yohimbine powder iiveki ezimbini, kodwa ufumana umkhuhlane, ukugula ukulala, kunye nokunciphisa ukuqina komzimba.
Thenga i-yohimbine hcl powder powder ngoku ....
14. yohimbine powder Iziphumo
Ukuba unomdla nge yohimbine powder kule ngongoma, ndiyaqonda. Akukho zininzi ezongezelelweyo zendalo ezenzelwe ukukunceda ulahlekelwe ngokukhawuleza. Kuthe, akusiyo ipilisi emangalisayo. Khumbula ukuba izongezelelo azakheli izidalwa ezinkulu. Ukuzinikezela koqeqesho olufanelekileyo kunye nesondlo.
Oko kwathiwa, nantsi into enokuyilindela kwi-yohimbine hcl yokuxhaswa kwe powderation:
Ukunyuka okunamandla kwamandla.
- Ukuncipha okuncinci kwesondlo.
Ukunyuka okuncinci ekuphumuleni izinga lokunciphisa umzimba kunye nokulahlekelwa kweoli, kunye neoli enenkani.
Ukuba loo nto ayizwanga yonke into enomdla kuwe, ndiyayiqonda. Ndiyifumela nje ngokuba kunjalo. Oku kuthethi, akuthethi ukuba akufanele ufumane nge-yohimbine hcl powder. Kuthetha nje ukuba kuhlakaniphile ukubhangqa i-yohimbine powder kunye nezinye izongezelelo ukuze ususe inaliti. Uyabona, ngokwabo, izongezelelo ezininzi zendalo zinganceda. Kodwa thabatha okulungileyo kunye, kwaye mhlawumbi uyazibona iimiphumo zabo.
Ngokomzekelo, ukuba udibanisa i-yohimbine powder ngokuzilolonga ngokukhawuleza kunye nezinye izongezo ezenzululwazi ezibonakaliswe ekuncedeni ukulahleka kwezinto ezinjenge-caffeine kunye ne-synephrine, iziphumo zingabizwa. Kwaye kwanele ukuba kunzima ukuba uhlale uqeqesha ngamandla kwaye udle ngokufanelekileyo.
15. Kutheni Abantu Bongeza nge yohimbine powder HCL powder?
I-Yohimbe bark ibe yonyango oluthatywayo lwe-erectile dysfunction ixesha elithile ngoku kunye nebala elibonakalayo lokusebenza. Ewe, ngoku i nkwenkwezi ephakamileyo kwihlabathi ukulahleka kwesisindo, kunye neziphumo zayo zokutshisa zibonakala zinokuthenjwa ngakumbi. Ngokukodwa, uphando lubonisa ukuba i-yohimbine powder inganciphisa ukulahleka kwexabiso kodwa indlela enjenjalo yinto encinci. Kwakhona kuthengiswa ngokuphindaphindiweyo njengesongezelelo ekuncedeni ukuba ulahlekelwe "inqatha enqabileyo" ngokukhawuleza, evakalayo njenge-humbug, eqinisweni, kodwa ngokwenene kunobungqina benzululwazi ukubuyisela le mabango phezulu. (Ngaphezu koko konke oku kumzuzu.) Umgca? Uninzi lwabantu longeza nge-yohimbine i-hcl powder ukuze linciphise isisindo, kwaye lusebenza. Njani, ngokuchanekileyo, kwaye njani? Qhubeka ufunda ukuze ufumane.
16. I-Best yohimbine powder Supplements-AASraw
Kuxhomekeke apho uvela khona
I-Wire Wire, i-Western Union, i-MoneyGram, i-Bitcoin
i-yohimbine powder ithathwa njenge-aphrodisiac yemvelo.Oko ke, i-dieters ezininzi ithatha i-yohimbine i-hcl powder ukufezekisa ukulahleka kwesisindo. Ngokokuba zesini okanye ukulahleka kwesisindo somgubo, yindoda eyaziwayo kakhulu kwimarike.Ngako ke, kuya kuba ne-ohimbine abaphakeli be-powder abaninzi, indlela yokukhetha ukuphakama okuphezulu kunye nokuphakanyiswa kokuphakama kwe-yohimbine powder? Oku kukukhathalela ngamnye wethu.
Okwangoku, abasebenzisi abaninzi banenkxalabo malunga nomthengisi we-yohimbine hcl powder AASraw, enika i-yohimbine hcl powder, kwaye ihlolwe ngabathengi abaninzi, kwaye umgangatho wemveliso unokwethenjelwa.
Ukunciphisa ukulahleka kokulahleka: Luhlobo luni lokulahleka kwesisindo oluphambene nawe? Izinto ze-20 ezibaluleke kakhulu Ufuna ukwazi nge-Lorcaserin HCL powder
tags: bathenge i-yohimbine hcl powder, yohimbine hcl powder, ohimbine HCL abaphakeli
Yohimbine powder: Izibonelelo kunye nokusetyenziswa kweJohimbine
I-anti-Obesity powder: Cetilistat powder vs Orlistat powder	Thenga i-Dutasteride Powder Online: Ukusetyenziswa, Isisombululo, Imiphumo emibi